ဇန်န၀ါရီနှုတ်ဆက် - Random of NangNyi
Home ဓာတ်ပုံ ပန်းချီ ဇန်န၀ါရီနှုတ်ဆက်
by NangNyi 4:44 PM
(နွေဦးတိတ်ဆိတ် ၂ က ဒီမှာပါ)
ဇန်န၀ါရီနှုတ်ဆက် Reviewed by NangNyi on 4:44 PM Rating: 5
Tags : ဓာတ်ပုံ ပန်းချီ
မောင်ရှင်းသန့် February 03, 2009 7:33 PM
အားကျလိုက်တာ...... ။ ဓါတ်ပုံတွေ ပန်းချီတွေ မြင်ရင် အားကျတယ်ဗျာ။
PS; မနန်းညီရေ.... ဟိုတစ်နေ့က တကယ် စာလုံးပေါင်းမှားရေးတာပါခင်ဗျာ ။ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
မောင်မျိုး February 03, 2009 8:31 PM
နန်းညီ က နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အနုပညာဖန်တီးမှုတွေက ကဗျာဆန်လိုက်တာ လေးစားတယ် ညီမး)
mirror February 03, 2009 8:53 PM
artist ကနေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဖလိမ်းမိတ်ကာဖြစ်သွား....???ဇီ...ဇီ....ဇီ...၊မတွေးတတ်တော့ မတွေးတာကပဲ အဆင်ပြေမယ်။
Aye Myat Myat Ko February 03, 2009 9:22 PM
ဒါပေမယ့် ပုံတွေကိုတော့ ဘာမှတ်ချက်မှ မပေးတော့ဘူး
Seng Tip February 03, 2009 9:36 PM
Anonymous February 03, 2009 9:37 PM
ဘောင်ကျပ်သူကို သဘောကျတယ်။ ဓါတ်ပုံဆိုင်နဲ့ ပြင်တာလား...။ ကောင်းတယ်...။
(ခုနက သယ်ရင်း အကောင့်နဲ့ မန့်မိတယ်.. ပြန်ဖျက်လိုက်တယ်)
သက်ပိုင်သူ February 04, 2009 7:59 AM
နန်းညီရေ.... Flame ဆိုတဲ့ပန်းချီကားလေကို အ၇မ်းသဘောကျတယ်.. ဘာmedium သုံးထားတာလဲ... Warm colour ကို ပုံရဲ့တော်တော်များများမှာ သုံးထားပြီး cool colour အနည်းငယ်ကို အပေါ်ထောင့်လေးမှာ အ၀ါဖျော့ဖျော့လေးနဲ့ေ၇ာသုံးထားတာ ကိုယ်အ၇မ်းသဘောကျတယ်.....
နန်းညီ February 04, 2009 9:00 AM
မမေရာ.. အပေါ်ကပန်းချီကားနာမည်က Flame မဟုတ်လား.. ဒီတော့ အဲ့ပန်းချီကားကိုဆွဲသူပုံက Flame Maker ဖြစ်ရမှာပဲလေ..
ပီဘွိုင်း.. ဟုတ်ကဲ့ Photoshop နဲ့နည်းနည်းကလိထားပါတယ်.. ဘောင်ကျပ်သူ (Frame Maker)မဟုတ်.. မီးတောက်ဖန်ဆင်းသူ(Flame Maker)ပါ..
ကိုသူရေ.. Flameက Pastel နဲ့ဆွဲတာပါ.. ဆွဲနေတဲ့ပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်း အတောင့်လေးတွေလေ.. ငါးကြီးဆီနဲ့တွဲသုံးတယ်.. Oil Color အတွက်သုံးရတဲ့ medium ပါပဲ
Anonymous February 04, 2009 1:09 PM
ကိုယ်တိုင်လုပ်တာလား ဒါဆို နည်းလေးဘာလေး မျှဦးဗျ ဆော့ဝဲ
ဖိုးဂျယ် February 04, 2009 7:01 PM
flame maker လဲ မိုက်တယ်။
နန်းညီ February 06, 2009 11:04 AM
to အိမ် >> ဘယ်ကမှမကူးပါ.. ပန်းချီနဲ့ဘွဲ့ရထားတာဆိုတော့ ဒီလိုပဲ မတောက်တခေါက်ဆွဲပါတယ်.. ဓာတ်ပုံတွေကလည်း ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်.. ၀ါသနာပါလို့ ရိုက်ပါတယ်.. ဘာဆော့ဖ်ဝဲကိုမေးမှန်း သေချာမသိပေမယ့်.. Photoshop တော့ နည်းနည်းကလိပါတယ်ရှင့်.. :)